DHAQAN AAD U QOTO DHEER | Organisationer av och för invandrare och flyktingar
Waxaa ka jira Swiidhan dhaqan aad u qoto dheer oo ku saleysan in loo shaqeeyo hab urureed.
Dadka isku danta ah ee doonaya in ay ku hawlgalaan waxyaabaha ay xiisaynayaan ama in ay bulshada wax ka badalaan ayaa waxa ay fureen ururro si ay shaqadooda u habeeyaan. Ilaa iyo maantana sidaas ayaa la sameeyaa. Wax badan ayaa ku dhisan dhaqankan ka soo jeeda dhaqdhaqaaqa umadda. Ururka shaqaalaha, ururadda ka dhawrsoonaanta khamriga iyo kuwa kiniisadaha madax banaanba waxa la dhisay 1800-ladii ilaa iyo haddana waxa ay ku shaqeeyaan hab urureed.
Urur ku shaqayntu waa si aad u wanaagsan oo loo qorsheeyo shaqada ku saabsan waxa ay dadku xiisaynayaan, sida bulshada loo saameeyo amma waxyaabo kaleba ha ahaatee. Ururku waxa uu qofka u saamaxayaa in uu ka qayb qaato saameynta xaaladdiisa, xag shaqo iyo xilliga firaaqada uu yahay iyo waliba guud ahaan nolosha bulshada.
Arrimaha siyaasadda iyo iskaashatooyinka oo hab urureed ah
Politik och fackliga frågor i föreningsform
Ururrada siyaayadeed ee dalkan Swiidhan waxa ay shaqadooda u fuliyaan hab ururreed. Waxaa jira ururro degmo oo wax qabadkooda uu ka mid yahay in ay go’aamiyaan warqadaha codeynta ee doorashada guud, taas oo macnaheedu yahay in ay iyagu doortaan cidda u mataleysa xisbiga (musharaxa u tartami doona) doorashada baarlamaanka, gobollada iyo degmooyinkaba. Ururrada degmooyinku waxa ay soo diyaariyaan barnaamijka xisbigooda ee heer degmo, kuwa goballada iyo ka guud waxa ay soo dajiyaan barnaamijka xisbiga ee heerka gobolka iyo ka dalka (gobollada iyo baarlamaanka).
Xisbigu waxa kale oo uu u adeegsadaa xubnaha ururrada yaryar ee degmada si uu xidhiidh ula sameeyo bulshada, marka go’aan laga gaarayo arrimo kala duwan.
Ururradu waxa kale ee ay door ka ciyaari karaan wada xaajoodka, tusaale ahaan iskaashatooyinku waxa ay u shaqeeyaan hab urur (sida uu magacoodu ku qeexan yahay). Tusaalae ahaan warshada oo kale waxa ay sameeyaan iskaashatooyin ay ku magacaabaan ururka warshadda oo ay ka furaan meelaha shaqada si ay u ilaaliyaan xuquuqda shaqaalaha ka shaqeeya meesha. Iskaashatooyinku waxa ay wada xaajood la sameeyaan ururrada dadka warshada leh oo ay ka wada hadlaan mushaharka iyo arrimo kale oo khuseeya shaqaalaha. Wadda xaajoodkaas oo u dhaca heer degmo ama heer guudba.
Hawlaha xilliga firaaqada la yahey.
Habka loo wado hawlaha xilliga firaaqada la yahay ee dalka Swiidhan waxa uu ku salaysan yahay hab urureed. Waxa aan dhamaanteen wada ognahay kooxaheena waaweyn ee ciyaaraha (kuwaas oo iyaguna ururro ah) tusaale, xagga kooxaha heerka koowaad kubadda cagta (allsvenska), hokida barafka (elitserien), kubadda koleyga iyo qaar kale oo badanba. Barnaamijyada loogu talo galey maaweelada dhalinta oo aad u badan kana mid yihiin ciyaaruhu ama muusigu iwm ayaa intooda badan ay ururradu gacanta ku hayaan. Marka ay bulshadu rabto in ay taageerto waameelada dhalinta ayaa waxa ay caawimo dhaqaale siiyaan ururrada kala duwan ee haya dhalinta.